अहिलेको आन्दोलनको कुनै नयाँ माग होइन | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » अहिलेको आन्दोलनको कुनै नयाँ माग होइन
अहिलेको आन्दोलनको कुनै नयाँ माग होइन
दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि तराई मधेशमा आन्दोलन भइरहेका छन् तर निकास निस्किने कुनै मार्ग देखिएको छैन, कहाँबाट कमजोरी भइरहेको छ ?
—सबभन्दा पहिला निकास भनेको के ? सम्झौतालाई भन्नु हुन्छ कि निर्णयलाई भन्नु हुन्छ ? त्यसकारण यो आन्दोलन सम्झौता प्रष्त हो कि निर्णायक हो त्यो कुरा बुझनु जरुरी छ । यो आन्दोलन अहिले पनि निर्णायक अवस्थामा पुग्न सकेकोे छैन । अहिले पनि सम्झौता प्रस्ते छ किनभने पटक–पटक सम्झौता र बार्गेनिङ्गको कुरा भइरहेको छ । सम्झौतामा लेनदेनको कुरा नमिलेकाले यो लम्बी रहेको छ । तर जनताले निर्णायक खोजेको छ भने नेताहरुले सम्झौता खोजेका छन् । त्यसै कारणले कुरा मिलेको छैन । जनताको इच्छा पूर्ति गर्न ताकत न त नेताहरुमा छन् न त राज्यसत्तामा छ । त्यसैले यति चाँडो निकास निस्किदैन यो आन्दोलन अझै लम्बिन्छ । अहिले कसैले टुङ्गगाए पनि जसरी २२ बुदेँ सम्झौता भयो, ८ बुदेँ सम्झौता भएर पनि आन्दोलन राकिएन त्यसैको निरन्तरता हो यो आन्दोलन । त्यसैले सम्झौतामा कसैले टुङ्गगाए पनि जवसम्म वस्तुगत रुपमा यो कुराहरु स्थापित हुदैँन तवसम्म यो आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा चलिरहन्छ, जस्तो मलाई लाग्छ ।
दुई महिना भन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन भइरहनुमा सरकार मात्र दोषी छन्, मधेशवादी दल दोषी छैन ?
—यसमा मैले सरकार भन्दा पनि राज्य व्यवस्थालाई दोषी मान्छु, किनभने सरकार भनेको आउने जाने कुरा हो । कोइरालाको सरकार परिवर्तन भएर ओलीको सरकार बनेको छ तर कुरा सबै त्यही हुन् नि त्यसैले राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्छ । त्यसकारण जबसम्म राज्यको संरचनाबाट विभेद हट्दैन तबसम्म यो आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा जुनसुकै रुपमा भइरहने हुन्छ । त्यसैले यो भन्दा पहिला ०६२ र ०६३ को आन्दोलनको म्याण्डेड त्यही थियो कि राज्य पुर्नसंरचना गर्ने खोइ त पुर्नसंरचना गरेको । राज्यको सबै अङ्गहरु सरकारदेखि लिएर संसद, न्यायलयलगायत सेनाजस्तो सबैमा पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यता थियो । त्यसैले यो संविधानमा नै प्रश्न चिन्ह उठेको हुनाले परिवर्तनको जुन वाचा गरेको तर त्यो पुरा नहुनुमा राज्य दोषी रहेका छ, राज्यका सञ्चालक दोषी रहेका छन् । त्यसैले यो आन्दोलन एउटा कलान्तरमा आएर मधेशले उठाएको हो त यो राष्ट्रिय आन्दोलन हो सम्पूर्ण देशको आन्दोलन हो । पुरा देशको समस्यासँग मधेशले जुझन खोजेको हो । त्यसैले देशको समस्या समाधान नहुञ्जेल मधेशको समस्या पनि समाधान नहुन सक्छ । मधेशवादी दलहरु जनताको अगुवाई गरिरहेको हुनाले तिनीहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । आखिर तिनीहरुले जनताको मागलाई सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
अहिलेको आन्दोलन खास के का लागि भइरहेका छन् ?
—यो प्रश्न सबैले सोध्छ । दुई दुइवटा आन्दोलन भइसक्यो तर अहिले पनि यो सोध्नुहुन्छ भने ००७ साल ०४६ साल लगायत ०६२ र ०६३ को आन्दोलन के को लागि भएको थियो । त्यसैले पटक–पटक यो सोध्नु आन्दोलनको अपमान गर्नु हो । यो आन्दोलन २२ बुदेँ आठ बुदेँ कार्यान्वयन नभएको कारणले भएको हो । सम्झौता राज्यले किन पालन गरेन ? त्यो सबै इतिहास पल्टाउदा सबै कुरा त्यहाँ रहेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा अन्तिरिम संविधानमा लेखिएको छ, कि मधेश लगायत सबै पहिचान झल्किने स्वायत प्रदेश बन्नेछ । खोइ त पहिचान सहितको स्वायत प्रदेश । आफैले गरेको वाचा पनि तोड्ने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि नमान्ने, सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई पनि पालना नगर्ने भनेपछि यो राज्य कसको हो, कसले चलाईरहेको छ यो राज्यलाई ? अरु जनता जो सार्वभौम त्यो शाषित भए रैती भए, जो चुनाव जितेर आए त्यो शासक भए राजा भए । त्यसैले केको लागि आन्दोलन भइरहेको छ भने पटक–पटक भनिरहनु पर्दैन । यो आन्दोलन मानव अधिकारको लागि हो, समानता, समावेशतिा, पहिचान, संघियता लगायको कुराहरुको लागि हो । पहिलो र दोस्रो मधे्श आन्दोलन जुन कुराको लासिग भएको थियो त्यसैको लागि हो, यो कुनै फरक आन्दोलन हैन, देश टुक्रियाउने खालको आन्दोलन पटकै पनि रहेको छ । वास्तवमा संघियतालाई बलियो पार्ने आन्दोलन हो ।
गाउँघरतिर आम मधेशी जनतासँग बुझ्दा उनीहरु भन्छन्, यो सरकारले हामीलाई कुनै पनि अधिकार दिएनन् । अब हामी यो देशका नागरिक रहने छैनौ । मेरो छोरा छोरी पढ्न पाउने छैन । जागिर पाउने छैन लगायतका कुराहरु भन्छन् के यो सही हो त ?
—एकदमै सहि कुरा भनेको छ । सामानताको अधिकारको भित्र पर्छ । समानता प्रत्याभुति हुने यो देशका नागरिक सबै बराबर हुने राज्यले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कुनै ग्यारेण्टी गरेको छैन । नागरिकतामा भेदभाव छ, अवसरमा भेदभाव छ, यो भेदभाव मेटाउने कुनै पनि संवैधानि अथवा कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन । त्यही भएर तिनीहरुको आशंका नजायज होइन एकदमै जायज छ । ती जनताहरु ००७ सालदेखी आउँदा आउँदै ०७२ सालसम्म पनि त्यही सामानताको मागेको हो । स्वतन्त्रता र पहिचान लगायतको कुरा माग गरिरहेको हो । तर पनि यसको कुनै ठेगान नभएपछि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता करो या मरो जस्तो भएको छ । अहिले हामी आन्दोलन गरेर अधिकार प्राप्ति गर्न सक्छौ भने हाम्रा छोराछोरीलाई फेरी आन्दोलन गर्ने बाध्यता नआयोस् भन्ने जनताको मनोभाव जायज छ । ती जनताहरु ००७ सालमा राणा विरुद्ध लडे, २०४६ सालमा राजतन्त्र विरद्ध लडे । गणतन्त्र स्थपनामा लडे । मधेश आन्दोलनमा पनि लडदैँ छन् । सामानता वस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा स्थापित होस् । कुनै पनि मन्त्री मण्डलको स्वरुपमा हेर्नुस् आधा जनसँख्या भएको जनताको प्रतिनिधीत्व ५ प्रतिशत मात्रै छन् । यो देशमा एक तिहाई मधेशी छन् । एक तिहाइ जनसंख्या जनजाती छन् र एक तिहाइ जनता खस वाहुनको रहेका छन् । जवसम्म यो समिकरणमा बाँडफाँड हुदैन, तबसम्म ती समिकरणलाई स्वीकारिदैन र सत्ता समिकरण, राज्यमा हिस्सेदारीको समिकरणमा जब यो फर्मूला अपनाइदैन तबसम्म यहाँ विभेद रहि रहन्छ । त्यसैले सधैभरिको लागि विभेद खतम गर्ने हो भने, हरेक कुरामा एक तिहाइको हिसाबले सबैको समान पाउनु पर्छ । पहिलो आन्दोलनमा संघियताको र गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्दा सम्पूर्ण देशका जनतालाई फाइदा भयो । त्यसकारण यो कुनै जाती विषेशको लागि आन्दोलन होइन ।
विगतमा पनि संघीयताका कारण सविधान बनेनन् । यसपटक यो कुरालाई थाँति राखेर जबर्जस्ती बहुमतका आधारमा सविधान जारी गरे तर संघीयताको विषय लिएर यतिका दिनदेखि आन्दोलन भइरहेका छन् । आखिर नेपालमा कस्तो संघीय प्रदेश निर्माण भए सबैको चित्त बुझ्छ ?
—संघियता वास्तवमा देशमा नौलौ अनुभव हो । एकीकृत शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा जानुको मतलब हो कि यहाँ धेरै पहिचानहरु गुमेका छन् । जस्तै एक तिहाई जनता मधेशी, एक तिहाई जनजाती र एक तिहाई खस बाहुन । तर यसमा एक तिहाई खसवाहुनको हाली मुहाली हुदै आएको छ । र दुई तिहाइ जहिले पनि उपेक्षित महशुस गर्दै आएका छन् यसका समाधान के हुन्छ भन्दा, विद्धानहरु र राजनीतिज्ञहरुको सहमतिमा संघीयतामा गए सबैको अधिकार र पहिचान सुनिश्चित हुन्छ भन्ने मनसायले यो प्रणाली अपनाइएको हो । अहिलेको संघियाताको खाका अन्तिरिम संविधान भन्दा पनि प्रतिगामी भएको छ । विद्धानहरुले सिफरिस नमान्ने तर चारजना नेताहरु एउटा कोठमा बसेर कोरेको संघियता कसरी मान्य हुन्छ ? जब राजा कसैले मानेनन भने यिनीहरुको संघीयता र संविधान जनताले कसरी मान्छन ।
त्यसो भए कस्तो संघियता र प्रदेश निर्माण गरियो भने सबैको चित बुझन सकिन्छ ?
—प्रदेशको कुरा अन्तरिम संविधान २०६३ ले निर्कियोल गरिसकेको हो । राज्य पुर्नसंरचना संसदीय आयोगले बनाएको ११ प्रदेशको खाका वैज्ञानिक तरिकाले छलफल गरेर बनाएको थियो । तर त्यहाँ यिनहिरुको स्वार्थ पुरा नभएकोले त्यसलाई अस्वीकार गरे । खस शासकहरुले आफ्ना हितमा यो सात प्रदेशको खाका तयार पारेको हो । संघियतामा जबसम्म सबैको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म यसलाई लागु पनि गर्न सक्दैन ।
पहाडी दलका नेताहरुले आआफ्नो अनुकुल हिमाल पहाडमा प्रदेश निर्माण गरे तर मधेशमा विवाद छाडेर हिडे । आखिर मधेशवादी दलले आफ्नो गोरुको बाह्रै टाका भनेर सधै हुँदैन, कम्परमाइज गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?
—मधेशवादी दलहरुको अधिकारको लडाइ भएकाले कसैलाई कम्पोरमाइज भन्दा पनि शासकीय जुन प्रकार प्रवृति हुन्छ शाषण गर्ने अनुरुप हुन्छ जुन परम्परागत शैलीमा हुन्छ । त्यसलाई राज्य सञ्चालहरुको एउटा प्रवृति देखिएको छ २५० वर्षमा । चाहे त्यहाँ जो कोही पुगोस् । अहिले पनि क्रान्तिकारीहरु पनि राज्यसत्तामा पुगेको छ तर खोइ राज्य संरचना परिवर्तन गरेको । त्यसैले स्वरुप र राज्यको जुन व्यवहार हो त्यो व्यवहार विभेदकारी हो । आफ्ना निहित र निजी स्वार्थका लागि यो प्रकारको गरिएको हो । मधेश प्रतिको मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तवमा पहिलादेखी नै विभेदकारी महत्वकांक्षा रहेको छ । मधेशलाई आफ्ना बिरता सम्झेको छ । धान, चामल उब्जाउने र काठमाडौँमा पठाउने काम राणा शासनदेखि चलि आएको कुरामा अहिले मधेशीले अधिकार माग्दा यिनीहरुको लागि नौलो कुरा भएको छ । तर तिनीहरुलाई यो थाहा छैन कि राण शाषण र लोकतान्त्रिक शाषणमा धेरै फरक छ । जनताले दुइ तरिकाले मात्रै निर्णय गर्छ कि त ब्यालेटले कि त बिद्रोहले । अब मतदान त मधेशी जनताले गरेकै हो तर मुल पार्टीहरुले मधेशीहरुसित विश्वासघात गरे । विश्वासघात गरेपछि हारेको नागरिकको विद्रोह गर्ने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ, त्यो विद्रोह र आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
रबर वा कुनै वस्तुलाई धेरै तन्काइयो भने भाँच्छ, आन्दोलन धेरै तन्कि रहेको छ, टुट्ने वा भाँच्ने सम्भावना छ कि छैन कि अझै शक्ति कायमै छ ?
—हो यो आन्दोलन तन्कीरहेको कुरा प्रस्ट छ । अब यो आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्छ । धेरै जसो मान्छेको शंका छ कि यो आन्दोलन अधिकार र पहिचानको लागि हो कि अरु कुनै वादीको लागि हो । दर्जनौ मधेशी शहिद भएको हो । देशमा अधिकारका लागि हो छुटाउनका लागि होइन । अबको आन्दोलन काठमाडौँ केन्द्रित हुन संम्भावना बढ्द्ै गएको छ । जनजाती, खसवादी या सम्पूर्ण देशको उपेक्षित वर्गहरुले एकजुट भएर आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा बढाउँछन् र सफल पनि हुन्छ । मधेशको अगुवाईमा अर्को आन्दोलन हुन्छ र नयाँ किसिमले आन्दोलन हुनेछ अब देश पछाडि तिर फर्केर जादैँन । यो आन्दोलन तन्केर देश र राष्ट्रको आन्दोलन हो र यो आन्दोलन तन्केर काठमाडौँसम्म आइपुग्छ ।
मधेशमा जो कोही गएर भाषण गर्दा भन्छन्, अब सिके राउतको विकल्प छैन अर्थात राज्यको रवैयाका कारण देश खण्डित हुनसक्छ, अलगाववादको नारा लाग्न सक्छ त्यो संभावना कतिको देख्नु भएको छ ?
—यो देश खण्डित हुनेबाला छैन । यो जसले सपना रोपे पनि र गरेपनि खण्डित हुदैँन । किनभने यो आन्दोलन कुनै क्षेत्र विवाद र जातीय विवाद र धार्मिक विवादको जस्तो छैन । मधेशले आफ्ना अधिकार पहिचानको कुरा खोजेको छ । मधेशले कहिल्यै पनि अर्को देशको माग गरेको छैन । उनलाई अर्कै देश चाहिएको भए अहिलेसम्म यतिका परिवर्तन भयो त्यसमा सहभागि हुदैन्थ्यो । हारेको निर्वाचनमा सहभागि भएकै छ सतामा गएकै छ । त्यसकारण ठोकुवा साथ भन्न सकिन्छ कि मधेशलाई अर्कै देश चाहिएको छैन । खाली अधिकार र आफ्ना पहिचान कायम गराउनको लागि अन्दोलन गरिरहेको छ । कसै—कसैले आवेगमा आएर मधेश टुक्रायाइ दिन्छु भनेर भने होला तर जनताले देश टुक्रयाउन सकिदैन । मधेशको हरेक ठाँउमा स्वायत मधश सरकार लेखेको छ कहि पनि स्वतन्त्र मधेश सरकार लेखेको छैन । त्यसकारण मधेशी जनताले मधेशलाई अलग देशको लागि आन्दोलन गरिरहेको छैन ।
मधेशमा सिके राउतको विकल्प छैन भनेर अहिले पनि धेरैले भनिरहेको छ नि ?
—हुन सक्छ कसैलाई उनको व्यक्तिगत धारणामा सहमति जनाउछन् होला तर मैले बुझे अनुसार सिके जीको विचारलाई जनताले सर्मथन गरेको छैन । भोलीको दिनमा हुनसक्छ होला त्यो भनेको पछिको कुरा हो । त्यस्तो केही नहुने भनेर ठोकुवा भन्न सकिदैन आखिर जनता हो । तर यस्तो गर्न जनतालाई बाध्य नपारोस् यी पृथकतावादी सोच भएका हरुले । राजा मालिक भएको देशमा गणतन्त्र ल्याएर जनता मालिक भइसकेको देशमा यी भारे भुरे राजाहरु टिक्न सक्दैन । सिके राउतको कुरालाई केही मिडिया र केही व्यत्तिहरुले उचालेको हुन सक्छ तर आम जनता त्यसको विचारसँग सहमत छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तपाई लाग्दैन कि यतिका लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा पनि मधेशी बुद्धिजिवी, मधेशी नागरिक समाजको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन ?
—हैन यो कुरा म मान्दिन, धेरै कुरा प्रभावकारी रहेको छ । मधेशी नागरिक समाज, मधेशी बुद्धिजीवीहरु, मोर्चाको नेताहरु र आन्दोलनकारीको अगुवाहरु सबैको तालमेल राम्रै छ । त्यसकारण बुद्धिजीवीहरु लागेको छैन भन्न सकिदैन तर जुन स्तरमा जानु पर्ने त्यो अनुरुप गइरहेको छैन यो हुन सक्छ । मानवअधिकारको क्षेत्रमा बुद्धिजिवीहरु लागेकै छन् । कानुनीरुपमा पनि मधेशी अगुवाहरु लागेकै छन् । सञ्चार माध्यमहरुमा तपाईहरु जस्ता लागेकै छन् । यो आन्दोलनमा विश्वको हरेक देशको राजधानीमा १० जना भएपनि मधेश आन्दोलनलाई सर्मथन गरेकै छन् । त्यसैले हरेक तह तप्का मधेशीहरु नेताहरु आ—आफ्ना कमजोरीको वावजुद पनि आन्दोलनमा लागेकै हो ।
सरकार र आन्दोलनकारी बीच वार्ता गराउनका लागि मधेशी बुद्धिजिवी तथा मधेशी नागरिक समाजले किन मध्यस्थकर्ताको भूमिका किन खेलि रहेका छैन ? कठिनाई कहाँ छ ?
—मधेशी बुद्धिजीवीहरु र मधेशी मध्यस्तकर्ताहरु आउनुमा दुई पक्षवीच मध्यस्थकर्ता बन्नको लागि यदि कुनै निष्पक्ष व्यक्ति जान्छ भने लेनदेनको कुरामा सहभागिता जनाउदैन । नेताहरुले कुरा गरिरहेको ठाँउमा कुनै पक्षबाट मध्यस्थकर्ताका रुपमा बुद्धिजीवीलाई आह्वन गरेको छैन । नेताहरुले लेनदेनको कुरा मात्रै गरेको जस्तो लाग्छ । त्यसकारण आन्दोलनकारीहरुको माग भन्दा फरक रहेको छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा आन्दोलनकारीहरुको माग भनेको अधिकार पहिचान हो भने नेताहरुको माग सत्ता र साझेदारी हो । त्यसकारण यी दुईबीच रहेको मागहरु मिलेको छैन । सत्ताको साझेदारीको लागि यत्रो लामो आन्दोलन गरेको त पक्के पनि होइन । पहिलो र दोस्रो आन्दोलनले सत्ता पु¥याएको हो तर त्यसको कुनै उपलब्धी भएनन् । त्यसकारण निष्पक्ष मध्यस्थकर्ता हुनुपर्ने आवश्यकता छ । तर यी नेताहरुको छाट काटले लाग्दैन कि मधेशी जनताका भावनालाई गम्भिर रुपमा लिएको छ । ग्राउण्ड रियालिटी भनेको आन्दोलनकारीहरुको माग अधिकार र पहिचानको हो जुन यी नेताहरुको बुँदामा छैनन् ।